China TA180C LED Isiqophi Light ifektri nabaphakeli | I-TEYELEEC
I-MT50RGB Ukukhanya Kwe-USB Enemibala Emibalabala
Ukukhanya kwe-Metal LED | I-TA180C
180pcs (isibani esifudumele 90 / isibani esibandayo 90)
I-Micro USB 5V/2A / Type-C USB 5V/2A
Ukukhanya (ukukhanya okukhanyayo):
-10 ~ 35°
Okwedlule: TA180 Mini Metal LED Isiqophi Light
Olandelayo: I-MT50RGB Ukukhanya Kwe-USB Enemibala Emibalabala
Ishalofu le-Premium Anodized Aluminium Alloy, elihlala isikhathi eside futhi elibushelelezi lokuthinta-thinta.
Idizayini yosayizi wesandla, umngane omuhle nomakhalekhukhwini wakho.
Ukulungiswa okulula kokushisa kombala kusuka ku-3100K kuya ku-5500K, kuhlangabezana nokukhanya okufudumele okuhlukahlukene nesidingo sokukhanya okubandayo.
Kokubili imbobo yokushaja ye-Micro ne-USB-C.
Ibhethri ye-Li-polymer eyakhelwe ngaphakathi engu-4000mAh.
• Isici sezindlela ezincibilikayo nezinombala: Ukufiphala kokukhanya (0%-100%) kanye nezinga lokushisa elishintshashintshayo lombala (3100K-5500K) ukuze kukhanye amavidiyo noma izithombe zakho.
• Isibonisi Sedijithali: iphaneli ye-LCD eyakhelwe ngaphakathi ibonisa ukufundwa okucacile kokukhanya, izinga lokushisa lombala namandla ebhethri ahlala isikhathi, okwenza le Phaneli Yokukhanya Kwevidiyo ye-LED ibe lula kuwe ukuze uthole amapharamitha anembile futhi usebenze ngempumelelo kakhudlwana.
• Ibhethri ye-lithium eyakhelwe ngaphakathi kanye ne-USB ekwazi ukushajwa: ngomthamo ongu-4000mAh, lokhu kukhanya kwephaneli ye-LED kungasetshenziswa ngokuqhubekayo imizuzu engu-90-110 ngamandla amakhulu. Futhi, ikhebuli ye-USB yohlobo C ifakiwe ukuze ukwazi ukuyishaja ngekhompyutha ephathekayo, ishaja yemoto, ibhange lamandla, noma amanye amadivayisi embobo ye-USB.
• Ikhwalithi ephezulu: Ipuleti le-Premium elikhanyayo lingathambisa ukukhanya futhi livikele amehlo akho. I-SMD yamandla aphezulu angu-180 ingabonisa kahle ukugcwaliswa kombala nobubanzi ukuze kuzuzwe i-CRI ephezulu (inkomba yokunikeza umbala) ngaphezu kuka-96%. Ikhwalithi ephezulu ye-aluminium alloy frame yenza ukukhanya kwesithombe se-LED kuqine kakhudlwana.
• Ukusetshenziswa kwendawo yonke: Isibani sokugcwalisa i-LED simklamo ohlangene futhi ongasindi, uyaphatheka kalula, futhi uhambisana namakhamera amaningi e-DSLR, amakhamera noma ubakaki we-C, ama-tripod, izitendi ezikhanyayo ezifakwe ukukhweza izicathulo ezishisayo noma 1/ 4 intshi isikulufu; isetshenziswa kakhulu ukuthwebula isithombe, imfashini, umshado, inhlolokhono, ukuthwebula izithombe kwestudio sokukhangisa nokuthwebula ividiyo.
I-LED: 180pcs (isibani esifudumele 90 / isibani esibandayo 90)
Amandla: 12W (Ubukhulu)
Okokufaka: I-Micro USB 5V/2A / Type-C USB 5V/2A
Ukukhanya (ukukhanya okukhanyayo): 1200LM (100%, 5600K)
Ukushisa kombala: 3100-5500K
Ukunikezwa kombala: ≥96
Ihora elijwayelekile: 50000h
Izinga lokushisa lokusebenza: -10 ~ 35 °
Isisindo Esiphelele: 194g
Ubukhulu: 151 * 76 * 10mm
I-Led Video Light
Ividiyo ye-Led Light
Iphaneli ye-Rgb Led, Gcwalisa Ukukhanya, I-Led Light Yendandatho Yezithombe, Light Panel Suppliers, Abahlinzeki beLamp Dimmable, Iphaneli Led Rectangular,